Akwụkwọ ụgbọelu - Ikkaro
Nkebi ka ekwuru mpempe akwụkwọ Planes. Mwube, ụdị ụgbọ elu, njikọ, atụmatụ, wdg.
Ebe anyị bụ ụmụaka, ha na-adọrọ uche anyị. anyị ewere a mpempe akwụkwọ anyị mpịachi ya na aka anyị na mberede na aghọwo ụgbọelu na-efe efe! Onweghi ihe ozo bara uru ma di irè kari na ntaneti.
Anyị bidoro n’ụdị gboo, ndị nke anyị niile mara ime na n’oge na-adịghị anya anyị chọkwuru, anyị bidoro chọba ụgbọ elu akwụkwọ dị iche iche, nke bụ nke kacha efe, ndị na-eme ngwa ngwa, wdg. , wdg.
N'akụkụ a, m ga-ekwu maka ụgbọ elu ndị a niile, nke si na nke kachasị mma, glider kacha mma. -esi mee ụgbọ elu nzọụkwụ site nzọụkwụ na ajụjụ ndị ọzọ na-akpali mmasị metụtara ụwa nke Origami na ihe e kere eke nke akwụkwọ ụgbọelu ụdị. You maara na e nwere ndị simulators ụgbọelu? Kedu maka asọmpi oge ụgbọ elu? Kedu ngwaọrụ ndị na-eme ụgbọ elu naanị ya wee bido ha? Ga-achọ ịrụ ụlọ ọrụ ụgbọelu nke gị?
Ọfọn, nke ahụ bụ ihe m na-eme. A na-anabata echiche ọ bụla ị nwere.
M hapuru gi nkuzi banyere otu esi eme akwukwo ugbo elu. Ma ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ origami n'anya ngalaba anyi
Ihe ndekọ ụwa na ụgbọ elu akwụkwọ
Anyị na-ahapụ vidiyo abụọ na ndekọ ụwa na ụgbọ elu akwụkwọ n'afọ a.
N'otu aka anyị nwere ụgbọ elu kachasị elu, yana sekọnd 27,9.
Ma na aka nke ọzọ, asọmmpi asọmpi nke m ahụbeghi mbụ. Ihe ndekọ ụgbọ elu ụwa na-agba ọsọ maka cube. Ezigbo ọchịchọ ịmata ya, amaghị m ebe ị ga-etinye cube ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ihe ma webata onwe gị, mana m ga-enyocha.
N’ezie ịmata ihe banyere cube, aga m anwale nke a, hehehe
Ihe niile a ka anyị hụrụ Oriplane
DC-03 akwụkwọ kacha mma kacha mma na ụwa
Na-egosipụta DC-03 Akwụkwọ ụgbọelu echebara echiche ụgbọelu akwụkwọ kacha mma n'ụwa.
Mana n'ezie, dịka onye kachasị mma, nke kachasị njọ ma ọ bụ nke ọma bụ onye ikwu, ọ dabere na ebumnobi anyị na-achụ, Achọrọ m ịsị na ọ bụ akwụkwọ kacha mma kacha mma na ụwa. Ọfọn, n'ọhịa a ọ dị ka ọ nweghị onye na-ama ya aka.